Diblomaasiyiin ayaa loo diiday inay booqdaan iyadoo Michael Kovrig Canadian ah maxkamad lagu saarayo Shiinaha - Wardeeq 24 TV Diblomaasiyiin ayaa loo diiday inay booqdaan iyadoo Michael Kovrig Canadian ah maxkamad lagu saarayo Shiinaha Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Diblomaasiyiin ayaa loo diiday inay booqdaan iyadoo Michael Kovrig Canadian ah maxkamad...
Diblomaasiyiin ayaa loo diiday inay booqdaan iyadoo Michael Kovrig Canadian ah maxkamad lagu saarayo Shiinaha
Diblomaasiyiin ka kala socda in ka badan labaatan dal ayaa loo diiday inay booqdaan maxkamadda Shiinaha Isniintii iyadoo Canadian-ka la xiray Michael Kovrig maxkamad lagu soo taagay magaalada Beijing iyadoo lagu eedeeyay basaasnimo.
Kovrig waa mid ka mid ah laba reer Kanada ah oo la xiray tan iyo 2018, ka dib markii lagu xiray Vancouver oo ah madaxa shirkadda Huawei, Meng Wanzhou, oo hadda la dagaallameysa u gacan gelinta Mareykanka, halkaas oo loo doonayo iyada oo lagu eedeeyay inay jebisay cunaqabateyntii Iran. Jimcihii, Canadian Spavor Michael waxaa lagu maxkamadeeyay magaalada Dandong, ee waqooyi-bari Shiinaha. Maxkamadeyntiisu waxay ahayd mid albaabadu u xiran yihiin waxayna socotey laba saac oo keliya.
Kovrig, oo ah diblumaasi hore oo reer Canada ah kana soo shaqeeyay kooxda xasaradaha adduunka (ICG), ayaa waxay ku eedeeyeen mas’uuliyiinta Shiinaha “inay xadeen macluumaad xasaasi ah iyo sirdoon iyagoo la xiriiray xiriirkii Shiinaha tan iyo 2017,” halka Spavor, oo ah ganacsade diirada saara North Korea, waxaa lagu eedeeyay inuu siiyay sirdoon Kovrig.
Maxkamadeynta Spavor ayaa dhacday iyadoo saraakiisha Mareykanka iyo Shiinaha ay ka ganacsanayeen furitaankii shir diblomaasiyadeed ee Alaska, waana markii ugu horeysay ee ay kulmaan diblomaasiyiinta ugu sareysa wadamada tan iyo markii uu xafiiska la wareegay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden
Washington iyo Ottawa labaduba waxay si isdaba joog ah u codsadeen in la siidaayo Kovrig iyo Spavor, iyagoo cambaareeyay xarigooda oo uu ku tilmaamay mid siyaasadeed iyo mid aan loo meel dayin.
Isagoo wariyeyaasha kula hadlayey banaanka hore ee maxkamada Isniintii, dacwad oogaha Canada Jim Nickel wuxuu ku eedeeyey Shiinaha inay jebisay waajibaadka heshiisyada caalamiga ah iyagoo u diiday saraakiisha qunsuliyada inay booqdaan muwaadiniintooda
Michael Kovrig wuxuu xidhan yahay mudo hada laga joogo laba sano, si sharci daro ah ayaa loo xidhay, hadana waxaan aragnay nidaamka maxkamada lafteeda in aanu ahayn mid hufan, aadna waanu uga walwalsanahay arintaan, ayuu yidhi, isaga oo intaa raaciyay in loo diiday galitaankeeda sababtoo ah “tan waa waxa loogu yeero dacwada amniga qaranka. “
Nickel wuxuu u mahadceliyey diblomaasiyiinta kale ee muujiyey midnimada Canada. Wuxuu sheegay inay jiraan ilaa 28 wakiil oo ka kala socda 26 dal oo kala duwan oo ka baxsan banaanka Beijing No. 2 Intermediate Court Isniintii, “iyagoo amaahinaya codkooda si deg deg ah loo sii daayo Michael Kovrig.”
Reuters waxay liis garaysay US, United Kingdom, Germany, Australia, Netherlands iyo Czech Republic oo ka mid ah wadamada wakiillada diblomaasiyadeed ku leh bannaanka maxkamadda.
Diblomaasiyiintaas iyo saxafiyiintaas waxaa la kulmay boliis aad u fara badan. Iskudayo soo noqnoqday oo diblomaasiyiintu ku doonayeen inay ku galaan dhismaha ka hor intaan dacwada la bilaabin ayaa laga hor yimid, sida ay ku soo waramayaan wariyeyaal ku sugan goobta.
Previous articleWaxay doonayeen dimuqraadiyad. Taabadalkeed waxay yiraahdaan booliska ayaa garaacay oo kufsaday.
Next articleiskahorimaadka sokeeye ee Lubnaan ayaa soo ifbaxaya marka burburka dhaqaale uu u banneeyo rabshado